Waa Kuma Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Dhulka Ugu Tuuray Ninkii Conor McGregor? – Xeernews24
Waa Kuma Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Dhulka Ugu Tuuray Ninkii Conor McGregor?
10. Oktober 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Wuxuu ahaa bandhig la isku bowdya-qaawinayey oo xeel dagaalna la isugu awood sheeganayey, laakinse guusha Khabib Nurmagomedov uu ka gaadhay Conor McGregor, dagaalkii ay isaga hor yimaadeen Las Vegas, ayaa iska beddelay habeen cayaareed oo cajiib ah, isagoo isku beddelay mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muranka badan taariikhda UFC.
Ilbidhiqsiyo ka dib markii uu wareeggii afaraad ku dhamaaday isdhiibid, ayuu cayaartoyga Ruushka ah shabaqa ka soo baxay, wuxuuna toos u abaaray taageerayaasha cayaartoyga Irishka ah, taasoo dhalisay xurguf weyn in halkaa ay ka aloosanto.
McGregor qudhiisa wuxuu ku lug lahaa rabshad dhex martay kooxda ka soo hor jeedday.
Ayadoo haddaba ay maamulayaashu baadhayaan hab-dhaqanka Nurmagomedov, ayaa misna dhanka kale, mustaqbalkiisa cayaaraha dagaalka aan waba la isu reeban – Lug iyo gacan – wuxuu yahay mid aan hubaal ahayn.
Laakinse sidee buu ku gaaray heerkan ah inuu aka mid noqdo ragga magaca weyn ku leh cayaaraha dagaalka?
Muddadii ugu dheerayd ee aan laga badin,
Qofkii ugu horreeyey ee Muslim ah ee ku guulaysta horyaalka UFC,
Bishii May, wuxuu garaacay Abel Trujillo, isagoo markaa dhigayey rikoorka cusub ee UFC ee muddada ugu dhakhsiyaha badan ee qof cayaar looga saaro. 21 goor ayuu ku guulaystay 27kii goor ee uu cayaaray.
Ka dib, bishii Sibteembar wuxuu garaacay Pat Healy oo Maraykan u dhashay, ayadoo guusha lagu siiyey ga’aan ay garsoorayaasha oo dhan isku raaceen. Dana white oo ah guddoomiyaha UFC ayaa laga hayaa “wiilkan waa mid xiiso leh. waxyaabo badan ayaan filayaa in aan wada samayn doonno wiilkan”.
Laakiin wuxuu mar kale dib u soo noqday Abriil, 2018.
Waxay ahayd inay iska hor yimaadaan Tony Ferguson – cayaar markii afaraad dhex mari lahayd labadooda, taasoo markii dambe la baajiyey. dhibaatadu markan waxay ka timid Ferguson oo jilibka ka dhaawacmay. Beddelkiisii waxaa cayaaray Max Holloway.
Holloway qudhiisana waxaa lagu tilmaamay inuusamn jir ahaan diyaarsanayn, wuxuuna miisaankiisa dhimay oo uu gaarsiiyey heer uusan ku bedqabin. Isna waxaa lagu beddelay Al Iaquinta, waxaase uu noqday mid aan la barbar dhigi karin Nurmagomedov, bacdamaa uu aad uga miisaan cuslaa.
Natiijadaas ayaa noqotay tan meesha soo galisay McGregor iyo Las Vegas.
Nurmagomedov wuxuu taageerayaashiisa u ballanqaaday inuu guulaysan doono, inkastoo McGregor uu laba goor oo hore ugu guulaystay horyaalnimadan, kana shacbiyad badnaa.
Mustaqbalka Nurmagomedov iminka mugdi ayuu ku jiraa.
Lama siin suunka guusha, lacagtii uu heli lahaana waa laga xayiray, ayadoo ku xiran natiijada baaritaanka wixii dhacay cayaarta ka dib
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/10/74-7.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-10 09:31:152018-10-10 09:31:15Waa Kuma Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Dhulka Ugu Tuuray Ninkii Conor McGregor?
Duufaan loogu magac daray LUBAN oo kusoo wajahan Soomaaliya: Meesha ay ka dhici... Xog cusub oo laga helay dilka Jamal Khashogi & Sirdoonka Maraykanka oo...